အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ်အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ်
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် 1
အခမဲ့ V-Power ကုန်သွယ်မှုစနစ် - Forex ဝါသနာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဗျူဟာ
ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့ဟာအလွန်အမြတ်အစွန်းကိုတင်ပြ တစ်ရက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ အင်အားကြီးသုံးပြီး အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ်.
ဒီစနစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, သူ Mike Semlitsch, ကတောင်းဆိုထားသည် "V-Power"၊ ဒါပေမယ့်ငါကခေါ်လေ့ရှိတယ် “ အလွန်တန်ခိုး”.
ဤသည်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဝိသေသထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုတယ် “ V” နှင့် inverted“ Λ” အဆိုပါ Forex ဇယားအပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံများ။
အဆိုပါ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် တစ်ဦးကို semi-automatic ဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အဆိုပါ Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းဘို့။
"အရာအားလုံးတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ရပါမည်။" - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
ဤ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် Forex နဲ့ Commodities, စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Indicator ကဲ့သို့အခြားအရည်စျေးကွက်အပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်။
မှတ်ချက်: ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများအတွက် entry ကိုအချက်ပြများကိုရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးရှိပါသည်!
အဆိုပါ အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကုန်သွယ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထဲက guesswork နှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျဇယားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တွေအများကြီးယူပြီးပါလိမ့်မည်။
ဤ အခမဲ့ဗားရှင်း ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် AUDJPY နှင့် EURCAD ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်ငွေကြေးအားလုံးနှင့်အကောင်းဆုံး FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး.
အောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံသည်ဤစိတ်ကူး၏ဥပမာတစ်ခုပြသ မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေ V-ပါဝါ EA ၏အရောင်း:
ဒီအခမဲ့ EA ၏သုံးပြီးထက်ပိုတထောင်ပျော်ရွှင်ကုန်သည်များရှိပါတယ်။ to-date ဖြစ်အောင်လက်ခံရရှိသော feedbacks အလွန်အထင်ကြီးကြသည်။
အတော်များများကကုန်သည်များဖြစ်ကြသည် ရိုးရှင်းခြင်းဖြင့်တအံ့တသြ ယင်းကို EA တို့ကထောက်ပံ့ပေးသောနေ့ရက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အချက်ပြမှုများ၏။
အခမဲ့ V-Power Trading စနစ် - ကြီးမားသောအနိုင်ရသောကုန်သွယ်ရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာ
တကယ်တော့မှာကတည်းက V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် အားလုံးအချိန်ဘောင်ထဲမှာအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် တစ်ရက်ကုန်သွယ် လည်းပဲ ရေရှည်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ။ ထို့အပြင် V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် ထိုကဲ့သို့သော Forex, Commodities, စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Indicator အဖြစ်အားလုံးအရည်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအလုပ်ဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် AUDJPY နှင့် EURCAD သာအားလုံး။ ဒီအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် V-ပါဝါကို EA သငျသညျရလိမ့်မယ်:
အလိုအလျောက် Trend အားသုံးသပ်ခြင်း
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေး Entries and Exit
ဤ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် ဒါကြောင့်ရိုးရိုးယူအမြတ်ထုတ်သောကွောငျ့ရိုးရှင်းစွာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအလုပ်ဖြစ်တယ် ထိုစမတ်ပိုက်ဆံဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏သံသရာအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှ!
သငျသညျရနျသူကိုသိရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိလျှင် "သင်တစ်ဦးတရာတိုက်ပွဲ၏ရလဒ်ကိုကွောကျရှံ့စရာမလိုပါ။ သငျသညျရနျသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိကြပေမယ့်မရရှိလျှင်, ရရှိခဲ့တိုင်းအောင်ပွဲဘို့သင့်ကိုလည်းရှုံးနိမ့်ခံရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရနျသူမဟုတ်သလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိကြလျှင်, သင်တိုင်းစစ်တိုက်ရာတွင်အရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်။ " - Sun Tzu၊ စစ်၏အနုပညာ
အဆိုပါစမတ်ပိုက်ဆံအမြဲအတူတူပင်လမ်းအတွက်လည်ပတ်ကတည်းကသင်ဤအပြုအမူကိုနားလည်နှင့် exploit သည်မှန်လျှင်, ယုတ္တိနည်းထို့နောက်သင်အမြဲအစဉ်အမြဲတစ်ခုအစွန်းရပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအစွန်းရှိနိုငျပါသညျ!
၏အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ V-ပါဝါနေ့ထရေးဒင်းစနစ် ရိုးရှင်းစွာသင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်စေသည်။
အခမဲ့ V-Power Trading စနစ် - အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
သင့်အနေဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မည် ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းအလားအလာ (13 + ဆကနဦးစွန့်စားမှု!) V-ပါဝါကို EA ၏။
သို့သော်ဤအရာသည်မလွယ်ကူပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီးသင်၏ FREE EA မှပေးသောကုန်ကြမ်းအချက်ပြမှုများကိုယုတ္တိကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုသဘောတရားများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုဖော်ဆောင်ပါကသင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အခမဲ့ V-Power Trading စနစ် - စောစောစီးစီးကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမည်သို့စတင်မည်နည်း
၏အလိုအလျှောက်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေ entries တွေကိုရန်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျမွငျ့မားဖြစ်နိုင်ခြေအရောင်းအထဲသို့ဝင်ချင်လျှင် သင်သည်မည်သည့် V- သို့မဟုတ် inverted V ကိုမရွေးနိုင်ပါအမြတ်အစွန်းများအတွက် -shape ပုံစံနှင့်မျှော်လင့်ချက်။ ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, ဒီ V-ပါဝါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များရှိပြီး:
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း automated entries တွေကို
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း automated ထွက်ပေါက်
ကျနော်တို့ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးမြင်ရပါလိမ့်မည် သငျသညျအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေ V-ပါဝါနေ့ကကုန်သွယ် Setup စက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ကူညီပေးသည်!
ဤ V-ပါဝါကို EA အလိုအလျောက်ဇယားရန်လိုအပ်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစေသည်။
အဆိုပါ EA ၏အလိုအလျှောက် ဒေါင်လိုက်တွေက dotted လိုင်းများကထပ်ပြောသည် ဇယား (ကုန်သွယ်နေ့၏အဆုံး) နှင့်အလိုအလြောကျက သင်တို့အဘို့အထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးထပ်ပြောသည်။
ပို. ပင်အရေးကြီးသောထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးထက်, တဲ့ Expert အကြံပေးသင်တို့အဘို့လမ်းကြောင်းသစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထပ်ပြောသည်!
သင့်အနေဖြင့်အရောင်းအထားနိုင်ပါတယ် V-ပါဝါကို EA သုံးပြီး ကို manually သို့မဟုတ်သင်အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသုံးနိုင်သည် တဲ့ Expert အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (semi-automatic entries တွေကိုနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုင်တွယ်) ၏။
အဆိုပါ EA ၏ပိုမိုလွယ်ကူပုံမှန်နေ့ကအလုပ်အတူလက်လီကုန်သည်အဖြစ်သင်၏အသက်တာကိုလုပ်ကိုအထူးလုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်။ V-ပါဝါကို EA နှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းအမှုကိုပြုရနိုင် တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေး.
အခမဲ့ V-Power Trading စနစ် - သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်ရန်
သင်ပိုကြီးရုပ်ပုံတစ်ခုအစွန်း၏ဦးတည်နေသောသူတို့သာ Setup ကို select လျှင်သင်သိသိသာသာ V-ပါဝါနေ့ထရေးဒင်းစနစ်၏အမြတ်အစွန်းမြှင့်တင်ရန်နိုငျပါသညျ!
တဖန်တုံ, V-ပါဝါကို EA ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်တို့အဘို့အကြောင်းခက်ခဲအလုပ်ပြုကြလိမ့်မည်: အဆိုပါ EA ၏အဆိုပါပိုကြီးရုပ်ပုံများ၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး!
ဤအတူ အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် သငျသညျစောစောစီးစီးကြီးတွေခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသိသိသာသာသာပိုကြီးလမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွား၌ဤ EA ၏နှင့်ကုန်သွယ် အသုံးပြု. စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်း System ကိုသင့်ရဲ့မိတ္တူကိုရယူပါ
Megaprojectfx တိုက်ပွဲ Pips EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Forex EA ၏
Forex Market က
အခမဲ့ V-ပါဝါကို EA
သူ Mike Semlitsch
V-ပါဝါကို EA အခမဲ့
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
အခမဲ့ V-ပါဝါကုန်သွယ်မှုစနစ် - အကောင်းဆုံးနေ့ TRADING မဟာဗျူဟာကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်အလားအလာ (13 + TIME ကနဦးကအန္တရာယ်!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! အခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ် - ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူအကောင်းဆုံးနေ့ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာသည် Forex စိတ်အားထက်သန်ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get: ဤဆောင်းပါးမှာတော့ https://www.bestforexeas.com/free-v-power-trading-system/ ကျနော်တို့ဟာအလွန်ကိုတင်ပြ အင်အားကြီးအခမဲ့ V-ပါဝါထရေးဒင်းစနစ်သုံးပြီးအမြတ်အစွန်းနေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ။ ဒီစနစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, သူ Mike Semlitsch "V-ပါဝါက" ခေါ်ပေမယ့်ငါက "အလွန်ပါဝါ" လို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ဤသည်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဝိသေသ "V ကို" မှ၎င်း၏အမည်ကိုတယ်နှင့် Forex ဇယားအပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ "Λ" ပုံစံများ inverted ။... ဆက္ဖတ္ရန္
Up ကိုမဲပေးရန်3Down မဲပေး ပြန်ကြားချက်